Umhla My Pet » Ngubani athi U Khawuleza?
Ngaba ngokwenene baphemba amadangatye uthando 90 imizuzu okanye ngaphantsi? yaye kutheni 90 imizuzu kwaye 27 imizuzu okanye 6 iiyure? Oku kuvakala crazy kunye nzulu okanye ngaba? Xa wapapasha incwadi yam yokuqala, Indlela Yokwenza Abantu onjengawe 90 Imizuzwana okanye ngaphantsi, abantu bacinga ukuba wayephambene kumanzi kakhulu, bade bafunda ukuba okunene isigqibo nokuba siyathanda abantu imizuzwana zokuqala ezimbini ubabone. Ngexesha 90 imizuzwana zidlule, unokuba kakuhle kwindlela yakho siguqula uluvo kuqala ibe nolwalamano luhleli, kuba loo nto ibe ubuhlobo, ishishini, okanye isigqibo. Enoba uyayazi loo nto okanye hayi, babizwa ngokuba ngabantu abanesiphiwo ngokwasentlalweni uyazi, abo bantu abangakwaziyo ukuhamba kungena kwigumbi izele ningabaphambukeli ndiqalise incoko nezinyanzelisayo nabani ikhuphe uqhubukusha imizimba yabo bathethe ngeendlela ezenza abanye abantu ngokukhawuleza ezifana, ithemba, kwaye baziva bekhululekile nabo. Wakuba uyayazi into abayenzayo kwaye njani loo nto, uyakwazi ukwenza ukuba uhlobo uqala kakhulu.
Ubuhlobo kunye namashishini, oku anqabileyo 90 imizuzwana unokuba ukuba unokuwuqalisa esiphaphazelayo. Njengoko iimeko ekunene, kunye nobabini ngokuthumela imiqondiso ezithile ethetha ngendlela ethile ngexesha elifanelekileyo, kunokuzisa kulande- umthande, uthatha ukuba atha- uqhagamshelwano olusondeleyo Isibophelelo. Yepesenti encinane nakwizibini, ezi ziganeko zenzeka phantse Ngephanyazo, ebangela ukuba kuwa eluthandweni apha emehlweni kuqala. Izibini ezitshatileyo ungaziva kulubona kwinkqubo kodwa kufuneka bhutyuza indlela yabo betyhutyha ngamava imposiso phambi kweeveki, kwiinyanga, okanye ngamanye amaxesha neminyaka kamva ekugqibeleni nqakraza. Kodwa inkqubo Akunyanzelekanga ukuba njalo
elide kwaye akufanelekanga ukuba uzakuwushiya ndenzile.
Ukuze abhale le ncwadi, Ndifunde amadoda nabafazi bonke kwihlabathi njengoko adityaniswe wenza kwandichukumisa omnye komnye. Mna zahlalutywa phantse amawaka amabini ngokuthandana ukusuka izibini asishiya uthando kule emehlweni lokuqala kwabo babengabahlobo iminyaka ngaphambi kokuba thandana. Ndathetha izibini abo Ebeza kunye 50 iminyaka kunye elivisayo Ebeza ukulala ukubathanda kwiinyanga ezimbalwa. Mna udliwano namaqabane elidlulileyo langoku zamadoda efanayo nabafazi ukufumanisa ukuba yintoni le banayo engalunganga kwixesha lokuqala, oko bafunda ngamava abo, kwaye baba njani ilungelo namaqabane abo ezintsha. Ndada wathetha gigolos kwi iiholide ilanga kumzantsi eYurophu ukufunda imfihlelo yabo ngokunxibelelanisa Bamxina amadoda kunye nabasetyhini, naphina, naninina, nangaphandle kwamathandabuzo. Ndincokole abantu abaphulukene namaqabane yokugula okanye iingozi, kwaye bakholwa ukuba akanakuze amthande kwakhona de imeko wazisa uthando olutsha ebomini babo. Endawunika iisemina kunye neendibano zocweyo ukuvavanya nezimvo ezikule ncwadi, kwaye ngenxa yoko ndade wamema nomtshato. Ndiyazi waza wasebenza iintsomi isisifo bengakhuselekanga nangokwenyama zisingelwe phantsi abenza, ummangaliso imimangaliso, bafumana romance ihleli ngaphaya amaphupha abo wildest nasemva kokuba inikelwe
lonke ithemba. Eli qela yokugqibela yomelezwa into Bendisoloko ndisazi: Kukho umntu wonke kwaye basoloko sadibana xa ubuncinane ubunokulindela.
imizuzu asithoba na nje kuza kufuneka ukuba bajonge nzulu ngokwaneleyo komnye umntu ukufumana nomvakalelo ukuba yintoni emenza aphumelele kwaye ukuvumela ukuba bajonge nzulu ngokwaneleyo kuwe ukuba benze okufanayo.